IDiploma - Isazi Sokuphila Komkhiqizo - AmaGeofumadas
IDiploma - Isazi Sokuphila Komkhiqizo
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokuklanywa kwemishini, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Kanjalo nakulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakheka kwe-parametric kumjikelezo wayo ohlukile wokumodela, ukuhlaziywa nokulingiswa kwemiphumela kwezinye izigaba zenqubo yokukhiqiza.
Yakha amakhono wokumodela, ukuhlaziywa, nokulingiswa kwezingxenye zomhlangano. Lezi zifundo zifaka ukufundwa kweCREO Parametric, olunye lwezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu emkhakheni wokukhiqiza; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi okwakhiwa ngawo imikhakha efanayo njenge-Inventor Nastran kanye ne-Ansys workbench. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi imodyuli yeCURA yokuqonda izingxenye zomjikelezo wokuphrinta we-3D.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «IDiploma Yesazi Yomkhiqizo»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Iphothifoliyo ene-id ye "lifecycle_expert" ayichazwa.
Thumela Previous«Langaphambilini IDiploma - Isazi sokusebenza seBIM
Post Next UGersón Beltrán weTwingeo 5th EditionOkulandelayo »